Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Mauritius » Omarjee Aviation na Alitalia na Mauritius
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu Omarjee
Omarjee Aviation nke Mauritius dị na ndekọ na-asị “Nnọọ na Alitalia! Anyị na-ele anya ịnabata gị n'ụgbọ n'oge a. Ugboro atọ kwa izu site na Mauritius ruo Rome. ”
Alitalia abụrụ ihe nkwado maka ụlọ ọrụ ndị njem na Mauritius na ugbu a na-amalite afọ nke abụọ nke ọrụ ha na-ejikọ Mauritius na Rome.
Bido n’Ọktoba 25, 2018 jiri ụgbọ elu 3 kwa izu gafee Rome, ndị njem ga-enwe ike iji Italytali gaa Mauritius maka oge udu mmiri niile n’ụgbọelu Airbus A330